Virtkpụrụ dị mma nke aki oyibo, mkpụrụ osisi mara mma site na mma - Afrikhepri Fondation
Deba aha / nbanye
Fraịdee, Septemba 18, 2020
Virtkpụrụ ọma nke aki oyibo, mkpụrụ osisi mara mma site n'ịdị mma
Pa Kouami Nb.t Yamssou Alsankara
min gụọ 2 min
Omume nke aki oyibo, mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ site na mma
Fmkpụrụ osisi na-esighi ike, oyibo na-esite na nkwụ, mkpụrụ osisi na-eto n'akụkụ oke osimiri, na aja, na ugwu mgbawa ma ọ bụ ụrọ, ọ bụrụhaala na ọ bụ ebe okpomọkụ na iru mmiri. Mara dị ka mkpụrụ osisi na-eche nche ma nwee nnukwu ume, oyibo nwere ọtụtụ vitamin na mmiri nnu. Ọ bụkwa mkpụrụ bara ụba na eriri (9,5g / 100g).
A na-ahụ vitamin C, nke a na-ahụ n'ime mmiri oyibo, na-enyere anụ ahụ aka ịnagide ihe egwu ma na-enyekwa ahụ aka ime ka ọ dị mma ma na-eme ka metabolism dị mma.
Vitamin B1 na vitamin B3 (niacin) na-enyere ahu aka ime ka ndi mmadu ghara idizi. Vitamin B2 dị mkpa maka uto na anya. A na-ahụ vitamin ndị a karịsịa na aki oyibo na usoro ya.
Oko oyibo bara uru na mineral dika ígwè, potassium, ihe abuo abuo maka obara, ma magnesium, zinc, phosphorus na ọla. Mkpụrụ osisi oyibo na-etinyeghị aka dị mma maka ahụike nwa n’ihi na ha bara ụba na vitamin na mineral dị mkpa maka ahụ ike.
Ahịhịa na-aghọ mkpụrụ kalori ka ukwuu mgbe o tozuru okè. Mmiri ara ehi oyibo bụ ọgwụ na-egbu egbu ma ọ bụrụ na erichapụ ya na afọ na-enweghị ihe ọ bụla.
Mmiri oyibo bụkwa ezigbo diuretic. Mgbakwunye nke akpọrọ bụkwa ọgwụ ịba ọcha n'anya nke ukwuu. N'ịchọ mma, ha na-eme ihe site na ime ka nsogbu dị njọ nke ọnyụnyụ na -akpata yana nsogbu nke nri anụ na-egbu site na anụ azụ.
Mmanụ n'ụlọ ebe obibi bụ pọgatị dị ike. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye edemede nke ifuru ma ọ bụ ihe na-esi isi, ọ na-arụ ọrụ na anụ ahụ site na ime ka ọ dị nro, na-eme ka anyanwụ dị mma ma na-eme ka ntutu dị mma.
Mgbe a gbanwechara, a pụrụ iji akpụkpọ anụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mee ihe dị ka mgbochi haemorrhagic, nje ndị na-efe efe ma na-egbochi ọrịa diarrheal.
Enwere ike iji shelle nke na-adị n'ime mmiri ahụ mee ka icheku ihe ọkụkụ nke nwere ike ịmịpụta gas na-egbu egbu yana ụfọdụ nsí nje. hụrụ na usoro nri.
MonteNativo Extra Organic Organic Coconut oil - 1000ml (1Liter) Organic na-akọwaghị, Dị ọcha na 100% Organic Coconut Coconut - Ezigbo maka ntutu, anụ ahụ na dịka nri (1x1000ml)
14,95€ dị na ngwaahịa
1 dị ọhụrụ site na 14,95 €
Zụta € 14,95
nke September 18, 2020 1:47 pm
MonteNativo organic aki oyibo mmanụ bụ 100% eke na-enweta n'oge mbụ oyi ịbanye nke aki oyibo.
Ọ bụ mmanụ dị oke mma, raw, vegan, free-gluten na lactose-free, trans-fatty acid na-enweghị, edepụtaghị ya na nke adịghị edo edo.
O zuru oke maka isi nri, ighe ihe na ime ihe, ma obu iji ya eme ihe dika akpukpo aru na ntutu isi.
MonteNativo organic aki oyibo mmanụ bụ mmanụ aki oyibo mmanụ na-enweghị ihe mgbakwunye.
MonteNativo organic aki oyibo mmanụ nwere 53% lauric acid.
Ozi Zoro Ezo nke Mmiri - Masaru Emoto (PDF)
Absinthe, dandelion, soursop, hemp: osisi ndị a na - egbu kansa
Ọbá akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Africa (PDF)
You nwere mmasị na ibe anyị?
Chọọ otu edemede
Chọọ otu edemede Họrọ udi otu Ka ihichapụ AFRIKHEPRI-TV Nwee obi ụtọ EBOOKS LIBRARY mmezi AKWỤKWỌ AFRICAN Egwuregwu ndị enyi ojii NTỤRỤNDỤ akwụkwọ ỤMỤAKA gburugburu ebe obibi Ịgba ohu Ihe ndi ozo ỤLỌ NNA Ụmụ nwanyị AFRICA MGBE NA-ECHI OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ N'ỤLỌ AFRICAN Ndebanye / nbanye NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ KINDLE NZUKWU KAMA ere akwụkwọ TV LIVE AKWỤKWỌ Ị GA-EFE AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Akwụkwọ PDF EGWÚ OZI, OZI PARADIGM KAMIT KAMA MGBE AKWỤKWỌ AFRICAN NA SAGES PHILOSOPHY & ỤBỌCHỊ Ihe omimi na psychology Health and Medicine EGO poems PSYCHART ọgwụ EZE AFRICA AHUIKE NA MEDICINE AJỤMỤ NA ỤBỤRỤ AKWỤKWỌ UZI NA NDỊ EZIOKWU egwuregwu AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ / OZI VIDIO Web-TV
*Site na ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị, ị kwenyere na Usoro & Ọnọdụ na amụma nzuzo.